MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA SHIINAHA - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Shiinaha
Apple-ka Imperial Shih Tzu oo 2 sano jir ah oo culeyskiisu yahay 8 rodol
Gadaal Shih Tzu
Nooca Princess-ka ah Shih Tzu
Eyga Imperial ee Shiinaha wuxuu u eg yahay nooc yar oo ka mid ah Shih Tzu . Waa muuqaalka wajiga waa macaan, indho fiiqan oo aan waxba galabsan. Waa eey is haysta, sifiican ufuran oo murqo leh oo leh walax ku habboon cabirkiisa. Waa eey yar oo adag oo leh jidh ka yara dheer dherarkiisa. Madaxa waa wareegsan yahay oo ballaadhan yahay, waana ballaadhan yahay indhaha dhexdooda. Muuska laba jibbaaran waa mid gaaban, oo hal inji ama ka yar ka jira min caarada sanka ilaa joogsiga la qeexay. Sanka waa mid ballaaran, oo leh sanka oo si fiican u furan. Sanka, bushimaha iyo qarka isha waa beerka eeyaha midabka leh, buluug eeyaha buluug ah iyo madow dhammaan midabbada kale. Ilkaha waxay ku kulmaan heer ama qaniinyo. Indhaha waawayn ee wareegsan ayaa midabkoodu mugdi yahay, laakiin waxay ka fudud yihiin eeyaha buluugga ah iyo kuwa beerka. Dhagaha waaweyn, suugaanta, hooseeya ayaa hoos u laalaada waxaana ku daboolan timo fara badan. Dhabarku waa siman yahay. Lugaha muruqyada waa toosan yihiin oo si fiican ayey ufiican yihiin. Dabada sare ee sare waxaa lagu qaadaa dhabarka waxayna ku daboolan tahay timo badan. Mararka qaarkood waxaa la saaraa goynta. Dharka laba-geesoodka ah waa mid cufan oo dheer, oo ku qulqulaya eeyga. Timaha ka sarreeya indhaha badanaa waxay ku xiran yihiin buundo sare. Waxaa jira gadh badan iyo shaarib timaha masarka ayaa gaaban. Koodhku wuxuu ku yimaadaa midabbo oo dhan.
chow oo lagu qasay wax-soosaarka dahabiga ah
Ujeedada Ey-ga Imperial ee Shiinaha waa inuu noqdaa mid rabaayad shakhsi ah iyo mid qoys. Iyagu waa eeyo adag, farxad leh, eey yar yar oo ciyaar leh dabeecad kalgacal iyo kalgacal leh oo ku habboon doorka ay ku leeyihiin nolosha. Waxay yihiin eeyo caqli badan, shaqada ka tagaya, aamin ah oo firfircoon oo waliba ku qanci doona inay si deggan ugu fadhiistaan ​​dhabta inta la ogol yahay. Waa kuwo firfircoon oo wadashaqeyn la leh xorriyad isku xigxigta. Eyga Imperial ee Shiinaha waa ciyaar iyo firfircooni. Waxay u baahan yihiin xirmo xirmo maalinle ah si loo gubo tamarta maskaxda iyo jirka. Hubso inaad tahay eeygan mid adag, kalsooni leh, oo iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada si looga fogaado Cudurka Dog yar , bini-aadamku kiciyay dhibaatooyinka dhaqanka . Had iyo jeer xusuusnow, eeyadu waa harooyin, ee maaha dad . U hubso inaad la kulanto dareenkooda dabiiciga ah sida xayawaanka.
Dhererka: Ka hooseeya 9 inji (23 cm)
Miisaanka: Ka hooseeya 9 rodol (4.1 kg)
Hypoglycemia cabirkooda oo aad u yar awgood. U nuglaanshaha laf-dhabarka iyo cudurka laf-dhabarka oo uu sababo dhabarka iyo lugaha gaagaaban. Sidoo kale infekshannada dhegaha, dhibaatooyinka indhaha sida isha cherry iyo ilkaha oo go? Waxay u egtahay inay hindhiso oo khuujiso waxayna yeelan kartaa dhibaatooyin xagga neefsashada ah. Eydan ayaa si fudud miisaankoodu u kordhaa waana inaan lagu badin.
Eyga Imperial ee Shiinaha waa wehel run ah. Waxay ku fiicantahay guri kasta oo gudaha ah waana cabirka ugu fiican ee guri dabaq ah.
In kasta oo ay tahay mid duufsan oo lagu xambaarayo xayawaanadan dhadhanka badan, kuwan waa eeyo yar yar oo firfircoon oo u baahan a socod maalinle ah . Cayaartu waxay daryeeleysaa baahiyo badan oo jimicsi ah, si kastaba ha noqotee, maadaama dhammaan noocyada cayaaraha aysan dhameystiri doonin dareenkooda asaasiga ah ee socodka. Eeyaha aan helin socod maalinle ah waxay u badan tahay inay soo bandhigaan dhibaatooyin badan oo xagga dhaqanka ah. Waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan rooti wanaagsan meel aamin ah, oo furan oo ka baxsan leedhka, sida daarad weyn, dayr ku wareegsan. Ha u maleynin in maadaama oo uu yar yahay ay tahay in lagu koobo meel yar.
Qiyaastii 10-15 sano
Qiyaastii 1 ilaa 4 eyyo
Eeyadan yaryar waxay u baahan yihiin qurxin maalinle ah iyagoo isticmaalaya burush burush ah. Marka lagu hayo jaakad dheer dusha sare badanaa waa la xidhaa si timaha looga ilaaliyo indhaha eeyga. Milkiilayaasha qaar waxay doorbidaan in la jarjaro si ay jaakadu ugu fududaato una lumiso waqti yar in la daryeelo. Nadiifi marinnada dhegaha iyo meelaha ku wareegsan indhaha. Koodhka waa la jarjarayaa bishiiba mar illaa lixdii toddobaadba mar. Haddii jaakadku dheer yahay waxay u baahan tahay marmar maydhasho. Noocani wuxuu u baahan yahay daryeel dhegta iyo jarjar joogto ah. Eeyaha Imperial ee Shiinaha waxay leeyihiin indho xasaasi ah oo u baahan in la nadiifiyo. Waxaa jira dhibco gaar ah oo aad iibsan karto si aad ugu shubto haddii loo baahdo. Weydii dhakhtarkaaga xoolaha waxa loo isticmaalo eeygaaga. Noocani wax yar ayuu u daadanayaa timaha mana u fiicnaado dadka xasaasiyadda la liita haddii jaakaddiisa si fiican loo ilaaliyo, sababtoo ah waxay daadiyeen maqaarka yar ee maqaarka.
buluug buluug buluug buluug buluug buluug buluug ah
Eyga Shiinaha ee Imperial Dog ama Imperial Shih Tzu waa Shih Tzu oo loo abuuray inuu ka yaraado heerka Shih Tzu ee qoran ee ah 9 rodol. Waxaa la bilaabay wakhti ka dib 1970s markii kiciyeyaashu ay doorteen runts ee keydkooda taranka. Weli waa la kariyaa maanta.
Shih Tzu ayaa la sheegay inuu ka soo degay ka gudubka Lhasa Apso ama eyga buurta Tibetan iyo Pekingese , magaalada Peking qarnigii 17aad. Dukumiintiyada qarnigii lixaad iyo rinjiyeynta waxay muujinayaan eeyo u eg Shih Tzu. Eeyadu waxay ahaayeen kuwa ugu cadcad boqortooyada Shiinaha waana la qadarin jiray oo sanado badan Shiinuhu wuu diiday inuu iibiyo, ka ganacsado, ama siiyo mid ka mid ah eeyaha. Ma ahayn ilaa 1930-yadii in lamaanaha ugu horeeya la soo dhoofiyo Ingriiska, markii ay ogaadeen askarta Ingriiska intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Shih Tzu waxaa laga aqoonsaday Ingiriiska 1946. AKC wuxuu aqoonsaday isirka 1969. Magaca ' Imperial Shih Tzu ama Tiny Teacup Shih Tzu 'waxaa badanaa loo adeegsadaa in lagu sharraxo cabbir yar oo Shih Tzu ah, oo ka yar heerka loo qoro. Badanaa waxaa loogu yeeraa nooca amiirad.
NCA = Ururka Canine Association
CPR = Diiwaan Gelinta La Xaqiijiyey
Waa kan Izzy oo 9 bilood jira oo weynaaday. Waxay miisaankeedu yahay 4 1/2 rodol. Dharkeedu waa mid qaro weyn oo qurux badan!
'Izzy Bitsy Roberts the Dog Imperial Dog oo 9 bilood jir ah oo culeyskiisu yahay 4 1/2 rodol, sawir sawirkiisu ag yaallo dhalo 20oz ah isbarbardhig cabir ahaan!'
Izzy Bitsy Roberts Eyga Boqortooyada Shiinaha ee 5 bilood jira— 'Izzy waa eey buluug buluug ah. Sida aad ku arki karto sawirrada (hoose), midabaynta dhalashada waxay noqon kartaa marin habaabin! Waxay sidoo kale leedahay 'agouti' midabaynta oo loo muujiyey talooyin casaan ah. Sawirkaan waa 5 bilood jir culeyskeeduna yahay 3 rodol. Ma hayso arrimo caafimaad. Iyadu waa qof aad u caqli badan oo jecel. Jaakadeedu waxay leedahay mawjado yar laakiin markii ay sii korodho, mawjaddu way sii yaraanaysaa. Koodhkeedu waa qurux badan yahay, waana tusaale wanaagsan !!! '
Izzy Bitsy Roberts Eyga Boqortooyada Shiinaha ee 5 bilood jira
Izzy Bitsy Roberts Eyga Imperial ee Shiinaha oo ah eey yar oo 12-toddobaad jir ah
Izzy Bitsy Roberts Eyga Boqortooyada Shiinaha oo ah ilmo yar oo dhashay oo ay la wadaagaan qashinkeeda.
Eyda Boqortooyada Shiinaha
buro on dabada eey ee salka
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah Eyga Imperial ee Shiinaha
Sawirada Eyga Imperial ee Shiinaha
adhijirka Australiyaanka ah oo lagu daro poodle
xadka collie jack russell terrier mix
Jack Russell iyo isku dhafka pomeranian
noocyada eeyaha labrador retriever
Bulldogs australia ee iib ah